Wade gaari oo mar kale dad dukaameysanayey ku weeraray dalka France! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wade gaari oo mar kale dad dukaameysanayey ku weeraray dalka France!
Mareeg.com: Weerarkii labaad oo loo adeegsado gaari ayaa ka dhacay magaalada Nantes ee galbedka dalka Faransiiska. Nin watay gaari xowli sare ku socda ayaa weerar jiiray dad ka dukaameysanayey suuq ku yaalla magaaladaas, wuxuuna dhaawacay 6 ruux.
Ninka dadka weeraray ayaa beegsaday dad isu diyaarinayey ciidda Kiristaanka, wuxuuna markaas kadib isku dhiftay toorrey, wuxuuna yaalla Isbitaal.
Madaxwaynaha wadanka Faransiiska Francois Hollande waxa uu ku baaqay in dadka Faransiiska ah aysan argagixin kaddib markii saddex weerar lagu qaday booliis iyo dad wadada marayay.
Hollande waxa uu hadalkaasi jeediyay kaddib markii nin labaad uu gaari jiirsiiyay dad marayay suuq mashquul badan oo ku yaala magaalada Nantes ee galbeedka dalkaas.
Dacwad oogayaashu waxa ay sheegen in weerarkan ay isu egyihiin midkii Dijon ka dhacay Axadii kadib markii uu nin gaari jiirsiiyay dad wadada marayay. Ninka hore oo ku qeylinayey Allaahu Akbar ayaa 11 ruux.
Sabtidii lasoo dhaafay booliska Faransiiska aya toogtay nin ku qeylinayey “Allahu Akbar”, kaasoo booliska ku weeraray toorrey, islamarkaana dhaawacay 3 ka mid ah.